Thinking about MZ 2.0 — MYSTERY ZILLION
Thinking about MZ 2.0
အခုတလော cassandra ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ MZ ကို cassandra နဲ့ ရေးကြည့်ချင်လာတယ်။ cassandra နဲ့ project လေး တစ်ခုလောက် လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာ project လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားမရဖြစ်နေတာ။ MZ ကိုပဲလုပ်တော့မလား စဉ်းစားနေတာ။ Why MZ ! လို့ မေးလာရင်တော့ cassandra က သာမာန် project တွေ မလိုအပ်ဘူး။ တခြားမပြောနဲ့ mediawiki ကို သုံးထားတဲ့ wikipedia တောင် mysql ကို သုံးထားတာပဲ ကြည့်လေ။ mysql ကလွယ်တယ်။ နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် community က ရှိပြီးသား။ user million နဲ့ ချီခဲ့မှသာ နည်းနည်းကြာတာ။ ဒါပေမယ့် mysql5မှာ partition နဲ့ fulltext search ကြောင့် million data ကိုတောင် ရှာနိုင်တယ်လို့ ပြောထားတာပဲ။ MZ ကိုတော့ အစကနေ အသစ်ပြန်ပြင်ရေးချင်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ornagai မပြီးသေးတာရယ် မအားသေးတာရယ်ပေါ့။ ornagai ကတော့ သိပ်ထွေထွေထူးထူး မကျန်တော့ဘူး။ edit unapprove ပိုင်းလေး ပြီးရင် ပြီးပြီလို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။ အခြား bugs လေးတွေကတော့ ရှိတာပေါ့။ MZ ကို ဘာလို့ အသစ်ပြန်ပြင်ရေးချင်လည်းဆိုတော့ vbulletin ကို နှစ်စဉ် မပေးချင်တော့လို့ပဲ။ အသစ်ပြန်ပြင်ရေးမှ server monthly စျေးက များသွားဖို့ ရှိတော့ cassandra အစား mysql5ပဲ သုံးဖြစ်မလား မသိတော့ပါဘူး။ နောက်တချက်က ကိုယ့် framework ကိုလည်း စမ်းချင်တယ်။ ရေးထားတဲ့ framework ကို စမ်းဖို့ မရှိသေးတော့ ဘာတွေ လိုနေသေးလဲဆိုတာ သေသေချာချာ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
MZ အသစ်တွေမှာ ဘာတွေ ပါလာမလဲ။
reply ပြန်တဲ့ ဟာတွေကို vote up , vote down လုပ်လို့ရမယ်။ post display ကို vote နဲ့ sort လုပ် ပြမယ်။ time နဲ့ဆိုလည်း ရရမယ်။ vote နဲ့ ဘာလို့ sort လုပ်ပြလည်းဆိုတော့ အချို့ post တွေကို မကြိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပေါက်ကရ လျှောက်ရေးတာတွေ ဖတ်ရတာ အချိန်ကုန်တယ်။ ဒီမေးခွန်းအတွက် ဒီအဖြေက vote အများဆုံး ဆိုလုံလောက်ပြီ။ မေးတဲ့သူ သဘောကျတဲ့ အဖြေကို answer အဖြစ် thread စတဲ့သူက ရွေးလို့ရမယ်။
2. comment in post
လက်ရှိ quote အစား ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ thread တွေမှာ comment ရေးလို့ရမယ်။ ဥပမာ ။။ ဘာလို့ ဒီ anwser ကို vote down လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရေးဖို့ပေါ့။ အဲဒါကိုလည်း link နဲ့ unlike ပေးလို့ရမယ်။
reputation system ပါလာမယ်။ moderator ဆိုပြီး သီးသန့်ရယ်လို့ မရှိတော့ပဲ။ reputation system များများရထားတဲ့သူက moderate လုပ်လို့ရမယ်။ တနည်းပြောရင် post များများတင်တိုင်း တကယ်ဖြေတဲ့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။ သူ့ reputation များမှသာ သူ ဘယ်လောက် ဖြေထားလဲဆိုတာကို သိနိုင်မယ်။
4. Tag system
မေးခွန်းတိုင်း tag system နဲ့သွားမယ်။ forum လို category နဲ့မသွားတော့ဘူး။ လူတိုင်း new tag ထည့်လို့မရဘူး။ reputation များတဲ့သူကသာ question အသစ်အတွက် tag ထည့်လို့ရမယ်။
အဲဒီ အချက် ၃ ချက်က FAQ system သဘောမျိုးဖြစ်ပြီး stackoverflow style အတိုင်းလုပ်ထားတာပါ။ MZ member အဟောင်းတွေ အကုန် အသစ်မှာ login ဝင်လို့ရမယ်။ post အဟောင်းတွေ ရှိချင်မှ ရှိတော့မယ်။ ဆောင်းပါးတွေ တော့ ပြန်ပါပါလိမ့်မယ်။
အခု လက်ရှိ MZ မှာ Event system က သိပ်မသိသာဘူး ဖြစ်နေတယ်။ reputation ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး event တွေ ထည့်လို့ရမယ်။ နောက်ပြီး attend လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး မသေချာဘူး စတာတွေ ထည့်လို့ရမယ်။ ဥပမာ။။ MCPA seminar တို့ အခြား နည်းပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ seminar မျိုးပေါ့။
ဆောင်းပါး အတွက် သီးသန့် ပါလာမယ်။ reputattion ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကိုယ်ပိုင် ဆောင်းပါးရေးလို့ရမယ်။
facebook connect ကို သုံးလို့ရမယ်။PM ပို့လို့ရမယ်။ လက်ရှိ MZ မှာလို Visitor Message ထည့်လို့ရမယ်။ Twitter ကို sidebar မှာထည့်လို့ရမယ်။ friend လုပ်လို့ရတာ မရတာကတော့ မလိုအပ်ဘူး ထင်တာပဲ။ social network layer ကတော့ နောက်ဆုံးမှာ သေသေချာချာ စဉ်းစားမယ်။ လိုအပ်သလောက်ပဲ ထည့်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။
8. Opensource Project Tags
တကယ်လို့ ကိုယ့် project ကသာ opensource ဖြစ်တယ်။ git လိုမျိုးနေရာမှာသာ ရှိတယ်ဆိုရင် q &aလုပ်လို့ရအောင် tags တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းလို့ရမယ်။ ဥပမာ။။ ornagai လိုမျိုးပေါ့။ ကိုယ်က အခုမှ စဝင်တဲ့ user။ ဘာ reputation မှ မရှိသေးဘူး။ project ကိစ္စပဲ q &aသို့မဟုတ် discuss လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် tags အသစ်လျှောက်လို့ရမယ်။ ဘယ်လို လျှောက်လို့ရမလဲဆိုတာကတော့ နောက်မှ စဉ်းစားမယ်တော့မယ်။
10. Outsourcing Project
သူ့ကို ဆောင်းပါးလို သီးသန့် အနေနဲ့ ပါဝင်မယ်။ outsource ချထားတဲ့ project တွေ အတွက်။ bit ကိစ္စတော့ မပါဝင်ဘူး။ just information အတွက် သီးသန့် အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားတယ်။ အဲဒီမှာလည်း q &aမှာလို လုပ်လို့ရမယ်။
ဒါက အခုတလော စဉ်းစားထားတာတွေပါ။ cassandra နဲ့ လုပ်ကြည့်ချင်ပေမယ့် mt dv အဆင့်မြှင့်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ mysql5ကိုပဲ အသေအချာ database ကို ပိုင်းပြီး လုပ်မလား စဉ်းစားနေတာ။ နောက်ပိုင်း mysql မနိုင်ရင်တော့ mt dv ကိုပြောင်းပြီး cassandra နဲ့ လုပ်ဖို့လည်း စဉ်းစားရမယ်။ ကဲ.... ornagai v2ပြီးရင်တော့ MZ 2.0 ကို လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ opensource တော့ ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပေးဖို့လည်း အစီအစဉ်မရှိဘူး။
Roughly speaking, for Voting System and reputation system , I've an idea about "how reputation system works".
မေးခွန်းတစ်ခုုဟာ upvote (+) ပေးခံရတဲ့အခါမှာ မေးတဲ့သူဟာ points များ ရရှိပါတယ်.. အဆိုပါ point များဟာ Reputation point များဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်း requtation point များကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါ users များအား Community က ဘယ်လောက်ထိ ယုုံကြည်ကိုသလဲဆိုုတာကို မြင်သာစေပါတယ်။ points များ တက်လာလေလေ ပြုလုပ်နိုုင်မယ့် အခွင့်အရေးပိုများလာလေလေ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ စိတ်၀င်စားဖွယ် မေးခွန်းတစ်ခုုကိုု မေးခဲ့ရင် သင့်မေးခွန်းဟာ upvote ပေးခံရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုုမှမဟုုတ်ပဲ အထက်က မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးဆိုုရင်တော့ downvote (-) ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ upvote 1 ခုု (+1) ဆိုုလျှင် reputation points ဟာ 10 ပါ။ Downvote 1 ခုုအတွက် (-1) ကတော့2points ပါ။ မေးခွန်း/အဖြေတစ်ခုကိုု points 200 အထိ ရှိနိုုင်ပါတယ်။ Moderation Task များအတွက်တော့ အောက်မှာ ကြည့်နိုုင်ပါတယ်။
15 - upvote လုုပ်နိုင်ပါတယ်
50 - Comment ထည့်နိုုင်ပါတယ်
100 - downvote လုုပ်နိုင်ပါတယ်
250 - မိမိကိုယ်တိုင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းများကို ဖွင့်နိုင်၊ပိတ်နိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ်
500 - မေးခွန်းများကို retag လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
750 - community wiki မေးခွန်းများကို Edit လုပ်နိုင်ပါတယ်
2000 - မည်သည့်အဖြေကို မဆို Edit လုပ်နိုင်ပါတယ်
3000 - မည်သည့်မေးခွန်းကို မဆို ဖွင့်နိုင်၊ ပိတ်နိုင် လုပ်နိုင်ပါတယ်
5000 - မည်သည့် Comment ကိုမဆို ဖျက်နိုင်ပါတယ်
10000 - မည်သည့်မေးခွန်း အဖြေများကို မဆို ဖျက်နိုင်ပါတယ်. ဒီနောက် အခြားသော moderation task များကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
For comment in post, I think that no vote down is required for comments
FYI, we are the center of the chart =D
I'll update my reply later..
အဲဒါတွေ လုပ်တာလဲ လုပ်တာပေါ့ .. .. ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါ .. MZ ကောင်းဖို့ပဲ မဟုတ်လား
လူဟောင်းတစ်ယောက် အနေနဲ့ MZ အတွက် တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါတယ် MZ မှာ ပါ၀င် ဆွေးနွေးတာတွေ အရှိန်ကျလာပါပြီ .. အရင် လို တက်တက်ကြွကြွ ပြောတာဆိုတာတွေ မတွေ့ တော့ သလိုပါပဲ . လူဟောင်းတွေလဲ တခြား IT forum တွေ ရောက်ကုန်ပါပြီ .. ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က ကို MZ ကို မ၀င်ဖြစ်တာကြာပါပြီ .. အခု ၀င်ကြည့်တော့ လဲ . အရည်မရ အဖတ်မရ . ၀င်မေးတဲ့ post တွေပဲ တွေ့တွေ့ နေရပါတယ် .. ပြောလက်စနဲ့ ဆက်ပြောရပါအုံးမယ် .. အခုဖတ်ကြည့်ရင် .. Hardware ပိုင်း ပြသနာ Virus ပြသနာလောက်နဲ့ တိုင်ပတ်နေပါတယ် .. တကယ့် ပညာရှင်တွေ ကပဲ ၀င်ပြောရတာ ပျင်းသွားလို့လားလို့တွေးမိပါတယ် .. ပျင်းလဲ ပျင်းလောက်ပါတယ် .. ကိုယ်မေးကိုယ်ဖြေသလိုဖြစ်နေတာကိုး .. ဘယ်သူက မှ အရေးတယူ ၀င်ဆွေးနွေးတာမျိုး ကို မတွေ့ ရပါဘူး .. ဗဟုသုတ အနေနဲ့ လိုအပ်လာရင် တော့ ကျွန်တော် MZ ကို ၀င်ပါတယ် .. စေတန် , လူပျိုကြီး တို့ ရေးတဲ့ ဟာတွေကို .. နောက် အရင် က ကို Zack ရေးတဲ့ joomla အကြောင်းတွေ .. အခု ပဲ ဖတ်နေတဲ့ စေတန် ရဲ့ cassandra အကြောင်းတွေ .. Ko Kyaw Soe Lin ရဲ့ LCD အကြောင်း . .. ..
ဟုတ်ကဲ့ ဆိုလိုချင်တာကတော့ အရင် လို ပဲ MZ မှာ . post တွေ အပြန်အလှန်တင် ကြ . ဆွေးနွေးကြ စေချင်လို့ပါ.. အရင် က လူဟောင်းများ လဲ ဖတ်မိကြရင် ပြန်ပြီး ရေးပေးကြဖို့ပါ.. နောက်ပြီး MZ မှာအဲဒီလို တွေ ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားကြဖို့ပါ.. ဘယ်အပိုင်းမှာ အားနည်းလို့ လူဟောင်းတွေ မရှိတော့တာလဲ .. ဘယ်လို့ ဆွဲဆောင်မှု နည်းနေလို့လဲ စဉ်းစားဖို့ပါ . ကျွန်တော့် post က MZ ကို ထိခိုက်သလိုဖြစ်ရင် .. သက်ဆိုင်သူများ ဖျက်ပစ်လို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ .
ဒီ post နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ေ၀ဖန်တိုက်ခိုက် လာသမျှကို လဲ ဘယ်လို မှ အကြောင်းပြန် ပြန်ပြောမှာ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ .. အားလုံး ကျေးဇူးပါ ..
မေးတာဖြေတာ အရှိန်ကျနေတာ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပါတယ် ဖြေရအောင်လို့ နေ့တိုင်းအနည်းဆုံး မနက်တစ်ခေါက် ညနေတစ်ခေါက်တော့ ဝင်ကြည့်ပါတယ် သို့သော်လည်း ကျွန်တော်ဖြေစရာ မတွေ့ဘူးဗျ မေးထားတာက emo ပြောသလို virus, hardware, file request ပဲတွေ့နေတယ် ပြောမယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေက ကိုယ်လည်းမသိဘူးရယ် ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားဘူး အရင်ကတည်းက ဖြေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာပဲ ဝင်ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ ဖြေစရာမရှိလို့ ဆောင်းပါးရေးပြန်တော့လည်း ကောင်းသည်ဆိုးသည် ဝင်ပြီးဆွေးနွေးမယ့်လူက မရှိဘူးဗျ အဲဒီ့တော့ emo ပြောသလို ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြော ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြေဖြစ်နေတယ် ဆောင်းပါးရေးဖို့က စာတွေအများကြီးဖတ်ဖို့လိုတယ် အချိန်အများကြီးကုန်တယ် ဒီတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒါရေးဖို့ကြိုးစားရတာ ကျွန်တော့်အတွက် အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်ဆိုပြီး အဲဒါတွေသိပ်မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးတယ်ဆိုတာက ဖတ်မယ့်လူအတွက်ရေးတာပါ ကျွန်တော့်အတွက်ရေးတာမှ မဟုတ်တာပဲ ဒီတော့ဆွေးနွေးမယ့်လူမရှိရင် ရေးတဲ့အကြောင်းအရာက စိတ်ဝင်စားတဲ့လူမရှိလို့ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပြီးဆက်မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ရေးတာကလွယ်ပါတယ် ကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်ငြင်းမယ့်လူပဲလိုတာပါ ဒါမှမဟုတ်မေးမယ့်လူပေါ့ တစ်ယောက်ပဲရှိရှိရေးပေးပါတယ်။
ကျနော်ဖြင့် မအားတာရယ်.. တခြားဖိုုရမ်တွေ မြန်မာဖိုုရမ်များမပါပါ.. stackoverflow, superuser အဲလိုုနေရာတွေမှာပဲ သွားသွားပြီး vote + အများကြီး ပေးထားတဲ့ popular questions တွေ top members တွေရဲ့ အကြောင်းတွေ သူတိုု့ရဲ့ blog တွေ သူတိုု့ရဲ့ မေးခွန်းတွေ အဖြေတွေ အဲဒါတွေ လိုုက်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ သိုု့ပေမယ့် MZ , MITP တိုု့ကိုုတော့ တစ်နေ့ တစ်ခေါက်လောက်တော့ အနည်းဆုုံး ၀င်ဖြစ်ပါသည်.. ဖြေစရာ ၊ ဆွေးနွေးစရာ မတွေ့ပါ.. တွေ့ရင်တော့ တွေ့သလိုု ၀င်ပြောလိုုက်တာပါပဲ.. ကိုုလူပျိုပြောသလိုု Virus ပြသနာ Hardware ပြသနာကိုု ကိုုယ်လည်းမသိပါ.. သိချင်လည်း ကိုုယ့်ဟာကိုုပဲ အတတ်နိုုင်ဆုုံး ရသလောက်ဖြေရှင်းပါတယ်။ ရှာကြည့်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ko စေတန်ပြောထားသလိုုလုုပ်တဲ့ စနစ်ဟာ ကောင်းပေမယ့် အတော်ကြိုးစားဖိုု့လိုုပါလိမ့်မယ်..
Community ရှိပြီးသာ နေရာတစ်ခုု အနေနဲ့ ပြောင်းဖိုု့ကတော့ ချက်ခြင်းကြီးလွယ်မယ်မဟုုတ်ပါဘူး.
အရင်ဆုုံး Stackoverflow Site Style ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းပါတယ်.. သူ့ဆီက Rules တွေကိုု Clone လုုပ်ရင်တော့ မပြေလည်နိုုင်တာတွေ ရှိလာနိုုင်ပါတယ်..
အဲဒီအတွက်လည်း ကျေကျေလည်လည် ဆွေးနွေးဖိုု့လိုုပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ - Superuser ( sister site of SO ) မှာဆိုုရင် ဒီလိုု အထွေထွေပြသနာတွေ ( software , hardware , linux , etc ) မျိုးတွေ မေးကြပါတယ်.. Virus ပြသာနာကိုု တစ်နေ့ တစ်ခုုလောက်တောင် မတွေ့ဘူးပါဘူး.. ဘာလိုု့လဲဆိုုတော့ သူတိုု့ဆီမှာ အတတ်နိုုင်ဆုုံး Free ကိုု ရှာပါတယ်။ မေးတည်းကိုုက Free ဆိုုတာကိုု ထည့်မေးပါတယ်။ Free လိုု့ မေးထားတာကိုု Shareware, Trial Version လိုုမျိုး အဖြေမျိုးပေးမိရင်တော့ သေချာပါတယ် Down vote ပေးခံရမှာပါ။ နောက် pirate link တွေ တင်ခွင့်မပြုပါဘူး. .. ဒါဟာ သူတိုု့ဆီမှာတော့ ကောင်းလည်း ကောင်းတယ် အဆင်လည်း ပြေတယ့် နည်းပါ.. သိုု့ပေမယ့် ဒီဘက်မှာတော့ အဆင်ပြေမယ်မထင်ပါ။
နောက် ပြောစရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ အထက်က System နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ပါ။
အဲဒါကတော့ SO က Community Question ဆိုုတာနဲ့ တူသယောင်တော့ ရှိပါတယ်။ ( http://meta.stackoverflow.com/questions/11740/what-are-community-wiki-posts/11741#11741 )
စိုုးရိမ်တာကတော့ ဒီ စနစ်က အစပိုုင်းမှာတော့ အားလုုံးနဲ့ Flexible ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး.. သိုု့ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ ကောင်းမွန် အကျိုးရှိ တဲ့ မေးခွန်းတွေ အဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာကောင်းပါတယ်။ ဒီ Community ကို အသုုံးပြုတဲ့ users တွေ ကိုုယ်တိုုင်ကပဲ moderate လုုပ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ . reputation system (vote များအတွက် အမှတ်ပေးတဲ့ စနစ်)ဟာလည်း user များကိုုယ်တိုုင် community ကို moderate လုုပ်ခွင့် ရှိစေနိုင်ပါတယ်. admin ရှိပေမယ့် သူက ဒီလောက်ထိ အခရာ မကျပါဘူး။
နောက် ဒီ System ကိုု တစ်ယောက်တည်း လုုပ်မှာလား Team နဲ့ လုုပ်မှာလား.. ဘယ်လိုုလုုပ်မှာလဲ ဒါတွေ ဆက်ဆွေးနွေးဖိုု့လိုုပါတယ်။.. အရင်ဆုုံးကတော့ စနစ်ကိုု အကောင်အထည်ဖော်ဖိုု့လိုုပါတယ်။ Rules များအတွက် idea ကတော့ ရှိနှင့်ပါတယ်။
အဲ.. နောက်အရေးကြီးတာက NATO ( no action ~ talk only ) မဖြစ်ဖိုု့လိုုပါတယ်
အရှိန်ကျလာတာကတော့အမှန်ပဲဗျ အရင်တုံးက active ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းမတွေ ့တော့ဘူး
ဖတ်စရာတွေကလည်းရှားလာတယ် တခါလာလည်း virus တစ်ခါလာလည်း virus နဲ ့
ရေးတဲ့သူတွေကလည်းနည်းလာတယ်ဗျ အေးစက်စက်နဲ ့အရင်တုံးက MZ တစ်ရက်မတက်ပဲနဲ ့
နောက်တနေ ့မှ ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် unread post ကတစ်ရာကျော်ရှိတယ် အခုကတော့ နှစ်ဆယ်တောင်
အနိုင်နိုင် ဘာတွေပြောင်းလဲသင့်သလဲ ????
အရင်ဆုံးတော့ အခုပြောင်းမယ် စနစ်ကို စလိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးမှ ဝင်ကူရေးမယ့်သူတွေ ဝင်ကူရေးပေးလို့ရအောင် စဉ်းစားထားလိုက်မယ်။ CI ကိုပဲ ပြောင်းပြီးရေးလိုက်ပါမယ်။ ဒါမှ နောက် ဝင်ရေးချင်တဲ့သူတွေ ဝင်ရေးလို့ရအောင်ပေါ့။ (သို့သော် opensource ဘယ်တော့မှ မဟုတ်ပါ)။ သမာရိုးကျ myanmar community တွေထဲကနေ ခွဲထွက်ဖို့ပါ။ သူများရေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်သလို ပြန်ပြင်ချင်တဲ့အခါ အခက်အခဲရှိလာတယ်။ ask.my-mm.org မှာ လုပ်ထားတာလေးက ကောင်းပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲရှိလာပါတယ်။
လက်ရှိ တစ်ခုလုံး ခြုံကြည့်ရင်တော့ beta phase 1 ကိုတော့ ၁ လလောက်နဲ့ run လို့ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ ပုံမှန်ထက် ပိုကြာမယ်။ နောက်လလောက် စရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။
btw, I'm not NATO :P ornagai is really came out... check in github
လူပျိုကြီးပြောသလိုပဲ article တွေကို ပြိုင်ငြင်းမယ့်သူတွေ ရှားလာတယ်။ MZ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး အခြား forum တွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ forum တွေများလာလို့ ဒီလိုပြန့်ကျဲသွားတာ မဆန်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ မြန်မာစာ သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာတွေ သုံးတဲ့ အင်တာနက်နှုန်းထားတာ english လို သုံးတဲ့ အင်တာနက် users နှုန်းကို မယှဉ်နိုင်ဘူး။ forum တွေ community တွေများလာတာနဲ့ ဒီလို ပြန့်ကျဲသွားတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် MZ ကို forum ကနေ ခွဲထွက်ပြီး အခု အသစ်ပုံစံကို စဉ်းစားမိတာပါ။
အသစ်ပုံစံက အစမှာ အသားမကျသလို မောင်ပြုံးပြောတဲ့ ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ပြောင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရမှာပဲ။ အရင်ဆုံးတော့ စလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ GUI Design ကတော့ stackoverflow အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ များပါတယ်။
I don't think so. MZ is lack of organized power. Can't establish trust to each other.That's why can't organize very well.
You mean what saturn said ?
yup.. there are many facts that supports to become like that. Whatever, we'll change.
Can't establish trust to each other
it'sabit subjective and argumentative .. I don't think so.. just for me, I can rely on someone by tracing who he is , what he does and how other ppl think of him.
I believe that the above system can resolve what you said. The more he gets the reputation, the more reliable he is , related with this community. If you think that you can trust (it's useful or not) that answer, just up vote. if it's crappy, useless, spam, just down vote. ( do not ( should not) takealook at who he is . whoever is it , may be Saturn or me or something else, just differentiate that answer is really useful or not. )
That's what I really love Stackoverflow, Superuser System.
let me add some subjective facts with my experience .
Well, I'm notageeky programmer .. thus my Stackoverflow is really poor though. But.. I believed that I can take part in Superuser .. ..
you can check out my Superuser Page. ( http://superuser.com/users/29679/mgpyone )
Within total 40 days,
1,729 reputation ( for 110 answers by me ) ( http://superuser.com/users/29679?tab=reputationhistory#tab-top )
7 questions by me ( it's my curiousness )
yup. my answers are being downvoted many times. but I got revisions why they down vote
Then, I've tried my best to be down vote again and to give the best relevant answer.
I don't prefer personal trust. I prefer organizational trust. Not Saturn-centered trust, just MZ-centered trust. Stack-overflow is not good for organizational trust.
I'm not sure what you said .. "trust"
yes.. SO is not good for Organizational trust.
but it'sabit doubtful
the SO Team itself is really organized and well-structured .. they are from different places and companies ( Joel - FogCreek , Jeff - Vertigo and so forth ) . They don't even know each other before. but they can build strong, reliable community .. why ??
No sooner did I've askedaquestion (http://stackoverflow.com/questions/2505824/how-hash-string-method-work) , I've got relevant , acceptable answers within 30 minutes , we can call it "Trust" ?
yes.. you are right absolutely . ~ MZ-Centered trust .. we're looking for it .
trust ဆိုလို့ Forum ဘယ်အရာနဲ့ ဘယ်အရာ trust ဖြစ်ရမလဲစဉ်းစားပေါ့ မေးတဲ့လူနဲ့ ဖြေတဲ့လူ trust ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး ဖြစ်လည်းဘာမှမထူးဘူး သူ့လည်းကိုယ်မသိ ကိုယ့်လည်းသူမသိ ဒါတွေလည်းအရေးမကြီးဘူး အရေးကြီးတာက မေးထားတဲ့မေးခွန်းရယ် ဖြေထားတဲ့အဖြေရယ်ပါ မေးတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာ ဖြေထားတဲ့အဖြေက ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ trust ဖြစ်နိုင်မလဲပဲ အရေးကြီးတယ်။ အပေါ်မှာမောင်ပြုံးပြောထားသလို အရေးကြီးတာက မေးထားတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေထားတဲ့အဖြေက ယုံကြည်ရမယ့်အဖြေ ဖြစ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ် ကျန်တာတွေက အဓိကမကျပါဘူး။ ဒီတော့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ ဖြေတဲ့အဖြေရဲ့ အရည်အသွေးနှစ်ခုကပဲ အရေးအကြီးဆုံးပါ။
နောက်တစ်ခုက မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ ဖြေတဲ့အဖြေကို Up and Down Vote လုပ်မယ်ဆိုတော့လည်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဟုတ်တယ်ထင်ရတယ် သို့သော်လည်း မြင်နေကျအခြေအနေနဲ့က မေးထားတာ ဖြေထားတာ ဘောကျရင်သာ Up လုပ်ခဲ့ကြမယ် Down လုပ်လို့အတော် ဝန်လေးကြမယ်။ ဥပမာပြောရရင် လွယ်လွန်းတဲ့မေးခွန်း မေးထားလို့ Up and Down ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် မြင်နေကျအခြေအနေအရဆို ဘယ်သူ့မှမလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်းကြည့်နေကြမှာပါ မသိလို့မေးတာလို့ မြင်တဲ့လူတွေလည်းများသလို မပြောချင်ပါဘူးလေဆိုပြီး ကြည့်နေမည့်သူကလည်း အတော့်ကိုများတယ်။ မှတ်သားလောက်တဲ့မေးခွန်းနဲ့ အဖြေဆိုရင်တော့ လူတိုင်းက Up လုပ်ဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။ ဒီတော့မေးတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အရည့်အသွေးကို ထိမ်းဖို့ကအတော်လေးခက်လှတယ်။
ဘယ်သူ up လုပ်သွားတယ် ဘယ်သူ down လုပ်သွားတယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်ဘူးဗျ။ အချို့ အရမ်းလွယ်ပြီး google မှာ ရှာနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေ။ ဥပမာ။။ avg free ဘယ်လို download ချရမလဲ။ အဲလိုမေးခွန်းတွေကတော့ down လုပ်သင့်တယ်။ အစကတော့ လုပ်မှာ မဟုတ်ကြဘူး။ down လုပ်မယ်ဆိုရင် post is voted down -2 လျော့ပြီး down လုပ်တဲ့သူကတော့ -1 လျော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် down လုပ်တဲ့သူကလည်း down လုပ်သင့်တာကိုပဲ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အရင်ဆုံး စနိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာအောင်တော့ ကြိုးစားရမယ်။
ဥပမာ။။ virus အသစ်အတွက် မေးထားရင် vote up လုပ်ပြီး အဲဒီ မေးခွန်းကို အခြားသူက ထပ်မေးထားရင်တော့ vote down လုပ်ကြမှာပေ့ါ။
vote down ကလည်း 100 reputation ရှိမှ လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ vote up က 15 reputation ရှိရင် လုပ်လို့ရပါပြီ။
ဘယ်သူ Down Vote လုုပ်တယ် Up Vote လုုပ်တယ်က SO မှာလည်း ကြည့်မရပါဘူး.
ကြည့်ရဖိုု့လည်း မလိုုဘူးလေ.. ကြည့်ရရင်က မလိုုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ ဖြစ်လာမှာပဲဟာကိုု။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက် Up Vote လုုပ်သွားတယ် Down Vote လုုပ်သွားတယ်တော့ Reputation ၁၀၀၀ ကျော်တာနဲ့ ကြည့်ရပါတယ်။
သူ့အဖြေက ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း ဘယ်လောက်ပဲ up vote တွေရရင် ဒီအဖြေကိုု မကျေနပ်တဲ့ မပြည့်စုုံတဲ့သူက Down Vote လုုပ်တာလည်း ရှိတာပဲ.. ကိုုယ့်လူမျိုးလိုုတော့ တမင်အမြင်ကတ်လိုု့ လုုပ်တာတော့ မရှိပါဘူး
အစပိုုင်းတော့ Policy ကိုု နည်းနည်းလေး လျှော့ထားရမလား မပြောတတ်ဘူး.. SU လိုုပေါ့.. SuperUser ဆိုုတာ StackOverflow, ServerFault, SuperUser သုုံးခုုထဲမှာ policy ကိုု အတော်လေး လျှော့ပေးထားတဲ့ နေရာပါ.. ရှိတဲ့ Moderator တွေ rep မြင့်တဲ့သူတွေကလည်း လျှော့ပေးထားပါတယ်.. Where can I download AVG ? လုုိမျိုးကိုု လက်ခံတယ်ပြောတာပါ.. ကျန်တဲ့ နေရာနှစ်နေရာကတော့ Strict ဖြစ်ပါတယ်..
မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေအတွက် rule နည်းနည်းလောက် ချကြည့်လိုုက်ပါမယ်။
ဘယ်လိုုမေးခွန်းမျိုးတွေ မေးသင့်လဲ ?
အရေးအကြီးဆုုံးကတော့ မေးတဲ့မေးခွန်းဟာ ဒီ Community နဲ့ သက်ဆိုုင်တဲ့ မေးခွန်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။ Computer နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ Community ဖြစ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုုင်တဲ့မေးခွန်းတွေပဲ မေးဖိုု့လိုုပါတယ်။ မမေးခင် site ထဲမှာ အလားတူ မေးခွန်းများ ရှိနေမလားလိုု့ သေချာစွာ ရှာကြည့်ဖိုု့ လိုုပါတယ်။ အဲဒါအရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းအရာတူပေမယ့် မေးခွန်းကွဲနေတာမျိုးက အရေးမဟုုတ်ပါဘူး။ မေးခွန်းများကိုု Search box မှ မေးခွန်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် (သိုု့) Tag များဖြင့် လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုုင်ပါတယ်
ဘယ်လိုုမေးခွန်းမျိုးကိုု ရှောင့်ကြဉ်သင့်ပါသလဲ ??
Personal ဆန်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ၊ အငြင်းပွားစေတဲ့ မေးခွန်းတွေ အဲဒါမျိုးတွေမမေးသင့်ပါဘူး.။ အခန့်မသင့်ရင် Down vote ပေးခံထိပါလိမ်မယ်။
ဥပမာ.. ဘယ် OS က အကောင်းဆုုံးလဲ .. ဒါမျိုးက မမေးသင့်ပါဘူး.. သိုု့ပေမယ်.. ဒီမေးခွန်းလေးကိုုပဲ နည်းနည်းလေးပြင်လိုုက်ပါမယ်။
ကျနော်က Windows Programmer တစ်ယောက်ပါ.. ဒါပေမဲ့ ကျနော် Mac OS ကိုု စိတ်၀င်စားပါတယ်။ ကျနော်က --- ဖြစ်လိုု့ Mac OS X ကိုု စိတ်၀င်စားပါ။ အသုုံးပြုဖိုု့ သင့်ပါလား... ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေနိုုင်မလား ဘယ်လိုု အကျိုးရှိနိုုင်မလဲ အဲဒါကြောင့် ကျနော် အဲဒါကိုု ၀ယ်ဖိုု့သင့်လား မသင့်ဘူးလား.. ( http://superuser.com/questions/3881/why-buy-or-dont-buy-a-mac )
အဲလိုုဆိုုရင် ဖြေတဲ့သူတွေကလည်း သူတိုု့အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူတိုု့ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အဖြေတွေရလာမှာပါ။
နောက် တိတိကျကျ မေးဖိုု့လိုုပါတယ်။ ဥပမာ..
File Cleaning အတွက် ဘာ Software သုုံးရမလဲ
အဲဒီလိုု မေးခွန်းမျိုးဟာ အရမ်း Generalize ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုုမှ ကျနော်က ဘယ် OS အတွက်ပါ။ ဘယ်လိုုကြောင့် သုုံးချင်တာပါ။ ... မေးတတ်ဖိုု့လိုုတဲ့အကြောင်းလေးသိစေချင်တာပါ။
မေးတဲ့သူဘက်က အဖြေတွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကိုုယ့်မေးခွန်းနဲ့ အဖြေနဲ့ရပြီ ကျေနပ်တယ်.. တကယ်လက်တွေ့လည်း အဆင်ပြေတယ် ဒါမျိုးဆိုု up vote နောက် .. Accept this answer ဆိုုတာရှိပါတယ်။
ဖြေတဲ့သူဘက်ကလည်း မေးခွန်းက မေးတာကိုု တိတိကျကျ အလိုုအပိုုမရှိပဲ ဖြေဖိုု့လိုုပါတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ သွေဖယ်တဲ့ ပြိုင်ဆိုုင်မှုတွေ ပါတဲ့ အဖြေမျိုးကိုု မပေးသင့်ပါဘူး။ အဖြေနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ မိမိရဲ့ အကျဉ်းချုပ် ထင်မြင်ချက်ကိုု Comment အနေနဲ့ ပေးနိုုင်ပါတယ်။ ( comment အတွက် up vote ပေးနိုုင်ပေမယ့် အဲဒီ upvote ကိုု Reputation အတွက် ထည့်မတွက်ပါဘူး )
Members တွေအနေနဲ့ ဖြစ်သင့်တဲ့ အချက်လေး နှစ်ချက်လောက် ရှိပါသေးတယ်။
Be Nice - သူများတွေက မိမိကို တလေးတစားပြုမှု ပြောဆိုသကဲ့သို့ မိမိကလည်း သူများကို လေးစားစွာ ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။ ထိုမှသာ မေးခွန်းများကိုု အတူတကွ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သိသလို သူများတွေ မသိနိုုင်ပါဘူး ။ မသိ နားမလည်တာကို ကောင်းမွန်စွာ ရှင်းပြရပါမယ်။ အပြစ်တင်မစောသင့်ပါဘူး။ ( ကိုုယ့်ကိုုယ့်ကိုုယ် ပြန်ပြောနေမိသလိုုပဲ :P )
Be Honest - Transparency ရှိပါစေ။ အဖြေတစ်ခုဟာ မသင့်တော် လွဲမှားနေလျှင် Vote down လုပ်ပါ။ ဒီနောက် Comment များဖြင့် အမှားကိုု ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုုံးက ဒီ system ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ.. အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ Community ဖြစ်လာရန်ပါ .. Wikipedia ကဲ့သို့ အားလုံးအတူတကွ Collaborate လုပ်နိုင်ပါတယ် မေးခွန်းတွေ အဖြေတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့သူတွေဟာ community ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး Content တွေရဲ့ Quality ကို တိုးတက်စေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် If this approach is not for you, we respect your choice.
အဲတော့ ဘာတွေကိုု ဘယ်လိုုလုုပ်မယ်ဆိုုတာ အကြမ်းဖျဉ်းသတ်မှတ်လိုုက်တာပေါ.. ( not NATO :P )
ကိုုယ်ကတော့ လေစိုုက်တဲ့အလုုပ်ကတော့ စိုုက်နိုုင်ပါတယ်.. ခုုတောင် လူုမုုန်းများရော့မယ် :P
အေးလေ.. မြင်ရတယ်ဆိုလည်း မပြောမိပါဘူး ကိုယ်လည်း ကိုယ်ထင်တာကိုယ်ပြောတာပါ သူများလူမျိုးကတော့ဟုတ်တယ် မကြိုက်လည်း မကြိုက်ဘူးပြောတယ် ဒါပေမယ့် အမြင်ကပ်လို့ ပြောတယ်တော့မရှိဘူး စဉ်းစားကြည့်တာက မေးခွန်းတွေအတွက် Down Vote ပေးထားလည်း လုပ်ကြပါ့မလားပြောတာ ကိုယ့်လူမျိုးက မကောင်းဘူးလည်းပြောဖို့ အတော်ခဲယဉ်းသား မမြင်ရဘူးဆိုတော့ ပြောမလားတော့မသိဘူးပေါ့လေ ထားပါတော့ စမ်းကြည့်ပေါ့ အဆင်ပြေတော့လည်းအမြတ်ပေါ့ မပြေတော့လည်း အရင်းအတိုင်းပဲဟာ မေးတာဖြေတာ လုပ်လို့ရနေရင်ပြီးတာပါပဲ။
ဘယ်သူမှ မပေးရင် ကျွန်တော် ပေးမယ်ဗျာ.. တစ်ယောက်တည်းကိုု ထိုုင်ခံပြီး ပေးမှာ ( ဘုုရား.. ကျနော့်မေးခွန်းတွေမှာ - တွေ မြင်ယောင်သေး :d )
အရင်ဆုံး NATO မဖြစ်အောင် စလိုက်ဖို့လိုတယ်။ suday ဆို စရေးတော့မယ်။
မနေ့က ကျွန်တော် နဲ့ ညမီးအိမ် တွေ့တော့ MZ ပုံစံပြောင်းမဲ့အကြောင်းလေးပြောမိတော့ ညမီးအိမ်ပြောတာလေးက စဉ်းစားစရာပါ ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီထဲမှာ တစ်ချို့ Thread တွေ Post တွေ က တော်တော်ကောင်းတာတွေပါတယ် ။ နောက်ပြီး တစ်ခုခု လိုတာတွေ သိချင်တာတွေရှိရင် ဒီအထဲမှာ အရင်ရှာတယ် ပြီးမှ Googling လုပ်တာများတယ် ။ အဲဒီတစ်ချက်ကိုနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဗျ ...
အဲဒီအတွက်က အပေါ်မှာ ပြောထားတာ ရှိပါတယ်.. Community Wiki ဆိုုတာပါ
အဲဒီလိုုဆိုုတော့ .. အကြမ်းလေးပေါ့ ( လေနဲ့ပြောရတာပဲ ဘာခက်တာမိုု့ :P ) for example.
1. အရင်ဆုုံးက Main Site ပါပါမယ် ..( ဒီမှာ ကိုုစေတန် အရင်ဆုုံးပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပေါ့ ) ( mysteryzillion.org )
2. MZ Blog ပါပါမယ်.. (if you can ) ( blog.mysteryzillion.org )
3. MZ Meta ပါပါမယ်.. ( Meta-discussion is discussion of the discussion itself instead of the actual topic of the discussion , site အပေါ် ပြင်သင့်တာ အကြံပေးချင်တာ , ထောက်ပြတာ , အဲဒီလိုုဟာမျိုးကိုု Meta မှာ ဆွေးနွေးဖိုု့ သင့်ပါတယ် ) ( meta.mysteryzillion.org )
4. MZ Careers ပါပါမယ် ( အလုုပ်လျှောက်ချင်တဲ့သူရော ခေါ်ချင်တဲ့သူရော ( သိုု့ ) Outsource Project ဖြစ်စေ .. ဒီမှာ တင်ဖိုု့ သင့်ပါတယ် ) ( careers.mysteryzillion.org )
5. MZ Event ပါပါမယ် ( ဘယ်နေ့မှာ ဘာပွဲ ရှိတယ် ဘာအကြောင်း ဆိုုတာမျိုးပေါ့ ) ( ဒါကိုုတော့ Main Site မှာ ပေါင်းထည့်လည်း အဆင်ပြေပါတယ် )
Main Site မှာ မေးခွန်းမေးတာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့က အစုုံပလုုံ မေးနိုုင်ပါတယ် ( ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့မသက်ဆိုုင်တာမျိုးတွေတော့ မပါပါဘူး ) Hardware, software, programming, bugs , virus စတာမျိုးတွေပဲ အပေါ်မှာလည်း ပြောထားပါတယ်
- မေးခွန်းကိုု Tag မလုုပ်ပဲနဲ့လည်း မေးလိုု့မရပါဘူး
- Text-Editor ကတော့ WMD - MarkDown ဆိုုတာလေးက အတော်ကောင်းပါတယ်.. ( demo - http://wmd-editor.com/examples/splitscreen )
- နောက် OpenID, Facebook Connect , Google , Yahoo အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ sign in / sign up လုုပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်.
SO ကိုု ဘယ်လိုု ဆောက်ထားသလဲဆိုုတာတော့ ဒီမှာ ဖတ်နိုုင်ပါတယ် ( http://blog.stackoverflow.com/2008/09/what-was-stack-overflow-built-with/ )
Social Network အတွက်တော့ ( only my personal view ) သိပ်ပြီး လုုပ်ပေးဖိုု့မလိုုဘူးထင်ပါတယ်။
User Page ပါမယ် .. သူ့ရဲ့ name , members for ( time ) ဘယ်ချိန်ကစပြီး member ဖြစ်တာလဲ , seen ဘယ်ချိန်မှာ နောက်ဆုုံး Active ဖြစ်သလဲ , Website and location and age (user ကိုုယ်တိုုင် ထည့်လည်းရပါမယ် မထည့်လည်း ရပါတယ်) , နောက် Description ထည့်လိုု့ရပါမယ်.. ( အဲဒီ Description မှာ Basic HTML Tag တွေထည့်လိုု့ရပါမယ်.. Basic HTML ဆိုုတာ ဘာလဲသိချင်ရင်က ဒီမှာပါ [ http://meta.stackoverflow.com/questions/1777/what-html-tags-are-allowed ] ) အောက်ပုုံကတော့ SU က ပုုံစံပါ
နောက် .. စဉ်းစားရမှာက
pirate links တွေကိုု တင်ခွင့်ပြုမှာလား.. Site မှာရော ပုုံတွေ File တွေ တင်ခွင့်ပြုမှာလား..
( ကျနော့်သဘောကတော့ No ပဲ :P )
ေ၀ဖန် အကြံပေး မေးမြန်းလိုုပါက
သိုု့ E-Mail ဖြင့် မေးမြန်းနိုုင်ပါတယ်
Now, Homepage design is done. Just desing
Question Page မှာ Question တွေမှာ Tag တွေကိုပါ မြင်ရအောင် ထည့်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
လောလောဆယ်တော့ နောက်ဆုံး Post ဖတ်မိလို့ အဲဒီ့အကြံဘဲထွက်သေးတယ်။